Shirkii Aayo Katalinta Reer Tanadland Oo Maaalintii Labaad Kasocda Gaalkacyo – Codka Qaranka Tanadland
Shirkii Aayo Katalinta Reer Tanadland Oo Maaalintii Labaad Kasocda Gaalkacyo
Reer Tanadland si ay u baraaraan gunta Habar-majeerteen waxaa lama huraan ah inaynu cidibtiro oo uusan qof ka harin.
Maantay oo maalin Jimce ah, taariikhduna ay tahay (08/12/2017) waxaa maalintii 2aad magaalada Gaalkacyo ka socda shirkii aayo ka tashiga umadda Tanadland. Ergadii reer Tanadland ee u shirku u xayiraa ee dagaamada fog ee gobalka Bari, ayaa gelinkii danbe ee arbacadii hore oo ay taariikhdu ahayd (06/12/2017) soo gaarey magaalada Gaalkacyo. Ergada reer Tanadland ee ka timid degaamada ay ugu shishayso magaalada xaafuun ee gobalka Bari, ayaa subixii doraato ahaa ku hakaday tuulada baliyada badan ee (Gol Barwaaqo). Tuulada (Gol Barwaaqo) oo u dhexaysa magaalada Teerage
iyo Gaalkacyo ayaa loogu sameeyey qadosharaf wufuuda ka timid bariga fog ee Tanadland.
Ergada reer nugaaleed iyo gobalka Bari intooda badan ayaa in mudaa waxay ku sugnaayeen magaalada Gaalkacyo. Walow ay jirtey in mudo dheer shirku u xayirnaa ergada degaamada fog ee gobalka Bari. Ergada reer Tanadland ee degaamada u dhexeeya (Iskushuban) iyo (Xaafuun) ayaa isniintii ina dhaaftay waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada Garoowe. Halkaas oo u ka soo horkacay suldaanka beelaha reer Tanadland ee gobalka Nugaal (Suldaan Subeyr Xaaji Maxamuud Abokor). Ergada oo ay la socdaan (Suldaan Subeyr Xaaji Maxamuud Abokor) iyo (Cali Ugaas Maxamed Ugaas Cali), ayaa waxay shalay galinkii danbe ay soo gaareen magaalada Gaalkacyo.
Ergada reer Tanadland ee gobalaka Bari intooda badan oo mudo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa hogaaminayey, suldaanka beelaha reer Tanadland ee gobalka bari (Garaad Cali Aadan Diini).
Shirka aayo ka tashiga umadda reer Tanadland waxaa hubaal ah in uu noqondoono shir taariikhi ah. Sidookale shirka aayo ka tashiga umadda Tanadland waa shir loo hanweynyahay oo laga filahayo in qorshe dowladeed iyo qarannimo in lagu aas-aaso. Mar hadii uu Tanade-weyne soo baraarugey oo u ka soo toosay koomadii nacasnimada ahayd ee uu 25-ka sanadood suuxsanaa, uuna shir-weyne isugu yimid uu aayihiisa uga tashanayo. Waxaa lamahuraan ah in hankeenu uu dawladgobaleed ka sareeyo maadaama soomaaliya wax dowlad lagu tilmaamikaro aysan ka jirin.
Shirka aayo ka tashiga reer Tanadland dowladda laga filahayo in lagu unko si ay u taabogasho waxaa lamahuraan ah in la meelmariyo qodobada soo socda:
1) Reer Tanadland waxaa lama huraan ah inay cadowga habar-majeerteen ka kaaftoomaan oo dekadda Bosaso ay joojiyaan inay isticmaalaan.
2) Reer Tanadland waa inay si deg-deg ah ay u soo iibsadaan maraakiibta iskarogeyaasha ah ee xeebaha aan dekadaha lahayn loo isticmaalo ugu yaraan 3 markab, oo qiimahoodu uu yahay mid kiiba 2 milyan ilaa 2.5.
Maraakiib taas oo qaada rakaabka, badeecadaha bagaashka ah, gaadiidka xamuulka iyo gawaarida yar-yar. Laguna iibiyo wadanka shiinaha oo aad u jaban.
3) Reer Tanadland iyaga oo isticmaalahaya maraakiibta iska-rogeyaasha ah waa inay hada wixii ka danbeeya ay wax kala soo degaan xeebaha gobalada mudug, Nugaal iyo Bari.
4) Reer Tanadland waa inay qorshe u sameeyaan hogaanka ciidamada Tanadland.
5) Maadaama umadda Tanadland ay ku jirto marxalad halis ku ah jiritaankeena umadnimo, waxaa lagama maarmaan ah in la aas-aaso ciidanka bad-baadada Tanadland.
6) Ardayda dhigata iskoolada kala duwan iyo jaamacadaha waa in waxbarashada laga joojiyaa oo ay ku biiraan ciidamad bad-baadada Tanadland.
7) Waa in la abuuraa ilo dhaqaale iyo hanaan dowli ah oo canshuurta dowladdu ay ku qaado si dalka loo horumariyo.
7) Sida ugu dhaqsaha badan cayayaanka Habar-majeerteen waa in lagu qaadaa duulaan lagu cidibtirahayo oo kedis ah.